डा. अरूणा उप्रेती काठमाडौं, ९ फागुन
कमला शर्माले अँध्यारो अनुहार लगाएर मलाई भनिन्, ‘आज बिहान मेरी आमासँग बेस्सरी झगडा भयो । उहाँ रुनुभयोे । बेस्सरी रिसाउनुभयोे । दिनभर अब खाना नखाने होला रिसले । उहाँलाई चिनीको रोग छ । उच्च रक्तचाप पनि छ । के गर्ने होला ?’
‘के भयो त्यसरी झगडा गर्ने कुरा ?’
उनले भनिन्, ‘मेरा श्रीमान्को जन्मदिनमा आमालाई नबोलाएकाले झगडा भयो ।’
‘किन नबोलाएको त ?’
‘श्रीमानको जन्मदिनमा पूजा राखेको थाहा पाएपछि मेरी आमाले ६० वटा अण्डा, चार–चार किलो मासु, त्यो पनि कुखुरा, खसी अनि बँदेलको मासु किनेर ल्याउनुभएको थियो । त्यसमाथि पनि जन्मदिनमा दिने भनेर उपहार त भिन्नै छ । मैले आमालाई कति भनिसकेँ त्यस्तो फजुल खर्च गर्नुपर्दैन भनेर । फेरि मेरा घरमा ४ जना छौँ । प्रायः सबै जना तरकारी बढी खान्छन् । त्यसमाथि पनि ६० वटा अण्डा र त्यत्रो मासु कसले खाने ?’
उनले भनिरहिन्, ‘मैले अमालाई सगुनका रूपमा ५ वटा अण्डा र अलिकति प्रतीकका रूपमा मासु ल्याउनुस् भनेर पोहोर साल पनि भनेकी थिएँ तर मान्नुभएन । त्यसमाथि बरु ज्वाइँलाई कपडा, सुट, सुनको औँठी पनि उपहार दिने विचार रहेछ । लौ जा त भनेर आमालाई जन्मदिनको उपहार दिने निहुँ खत्तम गर्न जन्मदिनमा कसैलाई पनि नबोलाएपछि त टन्टै सिद्धियो । अण्डा र मासु के गर्ने भन्ने चिन्ताबाट पनि बचेँ । आमाको खर्च पनि त जोगियो तर आमा रिसाएर उधुम छ । कहिले हाम्रो समाजमा यसरी चाहिनेभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति कम होला हगि !’
‘कदम त तिम्रो राम्रो हो । विस्तारै परिवर्तन आउला नि समाजमा । भोलि गएर फकाउनू । ठीक भैहाल्छ नि !’, उनलाई मैले शान्त पार्दै भनेँ ।
कमला जस्तै थुप्रै युवायुवती छन्, जो अनेक फजुल खर्चबाट जोगिन चाहन्छन् । महँगीको जमानामा खाना फ्याँक्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्न चाहन्छन् । तर, ‘अरूले मलाई के भने होलान् ?’ भन्ने डरले चाहेर पनि यस्तो गलत कदमको विरोध गर्न सक्दैनन् । तथापि, कमलाले घरबाटै यो कदम सुरु गरिन् ।
शशिले पनि त्यसैगरी घरमा झगडा गरेर एउटा राम्रो कदम चालिन् । उनले केही दिनअघि भनेकी थिइन्, ‘मैले मेरो ठूलो दाजुको विवाहमा किस्तीमा साइपाटा लैजानुपर्ने कुराको पनि विरोध गरेँ । थरीथरीका मिठाई, फलफूल आदि ५०–५० किस्ती लैजानुपर्छ रे ! त्यतिका खानेकुरा लैजाँदा एक त खर्च, अर्को खाना खेर जाने । तर, अरूलाई देखाउन पनि लैजानुपर्छ रे ! नत्र कुरा काट्छन् रे ! भनेर मेरी ठूलीआमाले भन्नुभयो ।’
उनी रोकिइनन्, ‘मैले अरूलाई देखाउने काम किन गर्ने ? एउटै किस्तीमा प्रतीकका रूपमा सबै कुरा लैजानु भन्दा सबैले मलाई झम्टिन आएका थिए । अन्त्यमा म केही झुक्न कर लाग्यो । लौ त भनेर ५० किस्तीको ठाउँमा १० किस्ती लैजाने निर्णय गरियो । धेरैको ठाउँमा थोरै लैजाने निर्णय गर्नु पनि एउटा ठूलो कदमै मानिनुपर्छ मेरो घरमा त ।’
‘मेरो छोरो ४ वर्षको हुन लाग्यो । उसको जन्मदिनमा ३ सय जनालाई बोलाउनुपर्छ भनेर मेरी आमा र सासूससुराले भनिरहनुभएको छ । मचाहिँ घरका २०–२५ जनालाई मात्र बोलाउने पक्षमा छु तर सबैबाट विरोध भइरहेको छ । ४ वर्षको बच्चाको जन्मदिनको भोज राम्रोसँग नगरे हामीलाई समाजका मानिसले के भन्लान् ?’
‘अरूको घरमा गएर खाएपछि भारा तिर्नुपर्छ नि !’ भन्छन् तर त्यस्तो नचाहिने कुरामा म फस्न चाहन्नँ बरु कुनै वृद्धाश्रम र अनाथाश्रमलाई पैसा र चाहिने कपडा दिए त काम लाग्छ । उनीहरूको आशीर्वाद लाग्छ’, आशाले भनेकी थिइन्, ‘मलाई मेरा श्रीमान्ले त भनिदिएका छन्, म त खर्च गर्दिनँ तर बुबा र आमाले ४ लाख खर्च गरे पनि मलाई वास्ता छैन । मलाई त यो प्रवृत्तिको विरोध गर्न मन लागेको छ । धेरै किचकिच भयो भने म त जन्मदिनको बेला पोखरा घुम्न गइदिन्छु ।’
आशा पनि त्यो समुदायमा पर्छिन्, जहाँ जन्मदिनमा, विवाहमा वा श्राद्धमा नचाहिने खर्च गरेर समाजमा ‘देखाउने’ कामको विरोध हुन्छ ।
‘विभिन्न भोज रमाइला त हुन्छन् । मानिस र साथीसँग भेट हुन्छ तर भोजमा जाँदा गहनाले सजिएर जानुपर्ने र हरेक भोज तथा विवाहमा नयाँ लुगा किन्नुपर्ने बाध्यताले अचेल त सकेसम्म जाँदै जान्नँ । जानै परे पनि अफिसका लुगामै जान्छु । मेरी आमा त मसँग यो कुरामा जहिले पनि रिसाइरहनुहुन्छ– हाम्रो अपमान भयो भनेर ।’
‘म अफिसबाट घर गएर लुगाा फेरेर आउने हो भने ९ बज्छ । यदि म ९ बजेपछि आए हुन्छ भन्ने लाग्छ भने म त अनेक सारी र गहनाले झकिएर आउँछु है ! भनेपछि अहिले उहाँ केही साम्य त हुनुभएको छ तर बीचबीचमा मैले गहना नलगाएर भोजमा आउँदा उहाँ अपमानित भएको कुरा सुनाउन बिर्सनुहुन्न । म भन्छु, गहना लगाएर कसैको इज्जत बढ्दैन बरु अचेल त लुटिने डर हुन्छ । यो कुरापछि त उहाँ झन् रिसाउनुहुन्छ तर धानिरहेकी छु जेनतेन’, आशाले भनेकी थिइन् ।
अहले जति महँगी बढ्यो, त्यति फेसन बढ्दो भोजको र बढ्दो मोजको प्रवृत्तिले समाजलाई विकृतितिर लैजान थालेको भान हुन्छ । बेफ्वाँकको खर्च पनि त्यतिकै समाजका लागि घातसिद्ध भइरहेका छन् ।
चाडपर्वमा आउँदाजाँदा जब म ढोकाबाहिर निस्केर असन र शहरका गल्लीमा जान्छु, तब ठूलो टपरीमा राखिएको एक माना च्युरा, आलु, मालपुवा, बोडीको तरकारी आदि ठाउँठाउँमा देखिन्छन् । यो देखेर मेरो मन खिस्रिक्क हुन्छ ।
एक दिनमा विभिन्न ठाउँमा कमसे कम १० जनालाई पुग्ने खाजा फालिन्छ । नेपालका विभिन्न ठाउँबाट कति फालिँदो हो ? भूत वा आत्मालाई तृप्त पार्ने संस्कृतिलाई जोगाउन त २–२ थोपा च्युरा र एउटा आलु अनि चार गेडा बोडीले पनि त पुगिहाल्थ्यो नि !
धार्मिक भावनाअनुसार कसैले भन्छ– आत्मालाई भोक लाग्छ, प्यास लाग्छ तर कसरी उनीहरूले त्यतिका च्युरा र आलु चपाउलान् ।
मैले आजकल बाटामा फालेको टपरीमा सग्लो च्युरा पाएँ भने ल्याएर मेरो कौसीको डिलमा राखिदिन्छु । परेवा र भँगेराले आनन्द मानेर खाएको देखेर मलाई आत्मा नै तृप्त भएको भान हुन्छ । त्यो टपरी कुन घरबाट आउँछ थाहा छैन तर मेरो घरको कौसीमा आउने परेवाको चाहिँ मोज हुन्छ ।
त्यसैगरी श्राद्धका बेलामा फालिने पिण्डदान र गरिने अनेक थरी दरदानबाट मुक्त हुने हो भने तपाईं हाम्रो जीवनको धेरै आर्थिक भार कम हुन्थ्यो । श्राद्धमा गरिने खर्चले अहिले कति मानिसले अनाथाश्रम र स्कुलमा चन्दा दिन सुरु गरेर एउटा राम्रो थालनी गरेका छन् ।
मलाई थाहा छ, हाम्रा केही धार्मिक गुरुहरूले त्यस्तो कार्यको विरोध गर्नुहुनेछ किनभने बसीबसी खीर–पुरी खान पाइने, दस दानका नाममा घरका सम्पूर्ण सामान सित्तैमा, त्यो पनि नयाँ पाइने कुरा कसले छाड्न चाहन्छ ?
धर्म गुरु रिसाउँदैमा हाम्रो केही जाँदैन भन्ने भावनाबाट तपाईं हामी प्रेरित भयौँ भने परिवर्तन हुने सम्भावना छ ।
आशा, कमला, शशि जस्ता युवायुवती पक्कै पनि हाम्रो समाजमा धेरै छन् तर उनीहरूलाई डर छ, समाजले के भन्ला भनेर । जुन दिन त्यो डरबाट मुक्त हुन्छन्, एउटा थालनी हुन्छ–नयाँ कदमको ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन ९, २०७६, १५:००:००
मानसिक तनाव कम गर्ने उपाय